Blue ihuenyo ọnwụ na-alaghachi dị ka aghụghọ Malware | Akụkọ akụrụngwa
Blue ihuenyo ọnwụ na-alaghachi dị ka Malware ojoro
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ ahụ tara ahụhụ n'oge ndụ ha niile na-acha anụnụ anụnụ ihuenyo, na ihuenyo na e gosiri enweghị usoro na anyị Windows PC mgbe anyị na-arụ ụfọdụ ọrụ dị mkpa na dị mwute ikwu na anyị na e dekọrọ na mbụ na-akpaghị aka site na Malitegharịa ekwentị nke kọmputa na-enweghị ike ime ihe ọ bụla iji zere ya. Ọbụnadị Bill Gates tufuo ihuenyo a mgbe ọ webatara Windows 98. N'ụzọ dị mma, ihuenyo a anaghị aga n'ihu na nsụgharị Windows kachasị ọhụrụ nke Microsoft malitere na ahịa, mana iji mee ka ọ dịrị ndụ na ebe nchekwa otu ìgwè ndị na-agba ọsọ na-erite uru na ya.
Ojiji ha na-enye na ihuenyo a bụ iji mepụta aghụghọ n'ịntanetị. Onye ọrụ ahụ, nke nje Hicurdismos bu malware na mbụ, ga-ahụ ihuenyo dị ka onyinyo ahụ dị n'elu gosipụtara na ihuenyo kọmputa ha, gbanwetụrụ ma na-agbakwunye nọmba ekwentị ha kwesịrị ịkpọ iji dozie nsogbu ahụ. N'ezie, ị ga-enwe kaadị kredit gị n'aka. Iji gbalịa ime ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya, malware a na-egbochi ma òké ahụ na njikwa ọrụ iji gbochie anyị ịnwa imechi windo ahụ. A na-eche ihe niile echiche.
Nke a malware nwere ike iru kọmputa anyị zoro ezo dị ka a ga - asị na ọ bụ Microsoft Security Essentials. Buru n'uche na site na Windows 8 Microsoft na-ejikọ antivirus a na ụmụ amaala, yabụ na ọ dịghị mkpa ị paya ntị na ozi ịdọ aka na ntị na-agwa anyị na anyị echekwaghị na ha na-enye anyị ka anyị budata ngwa a.
Iji gbochie ọ bụla ọrịa ọ bụghị naanị site na nke a kama site na malware ọ bụla, anyị kwesịrị ị paya ntị na ozi nche nke Windows na-egosi anyị oge ọ bụla anyị na-ebudata faịlụ. N'ime ha ka a gwara anyị ma ọ bụrụ na atụkwasịrị onye nrụpụta obi ma ọ bụ ọ bụrụ na, n'ụzọ megidere, ekwenyebeghị ya. Na mgbakwunye, anyị ga-eburu n'uche ebe anyị budatara faịlụ a na-ekwu. Ọ bụrụ na amaara weebụsaịtị ahụ enweghị nsogbu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ebudatara ya na ibe weebụ njikọ, anyị nwere ike ihichapụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Blue ihuenyo ọnwụ na-alaghachi dị ka Malware ojoro
BlackBerry DTEK60 na ere ya ere
Ngwaọrụ Mkpa, ngwaọrụ Microsoft ọhụrụ nke anyị amachaghị ihe ọ bụla